အဆီတွေ ဘာကြောင့် ချရခက်နေပါသလဲဆိုရင်? - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
အသက်အရွယ်လေးရလာတာနှင့်အမျှ ကြွက်သားများလည်း ဆုံးရှူံးလာစေသလို၊ အခြားသောအဆီများ လည်းတိုးလာနိုင်ပါတယ်။
😥အဆီတွေ ဘာကြောင့် ချရခက်နေပါသလဲဆိုရင်?
📊အသက်အရွယ် အနေထားတစ်ခုလည်းရောက်နေပြီ အဆီတွေ ဘယ်လိုချချ၊ အဆီကျတာနှေးများနေသလား၊ ဘာကြောင့်များ အဆီကျဖို့ ခက်ခဲနေရပါသလဲ! အမှန်က သင်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ဝိတ်ချဖို့၊ အဆီကျဖို့ ခက်ခဲနေတာမဟုတ်ကြောင်း အောက်ပါစာလေးကို လေ့လာခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပါပြီ။ ဒါဆို ဘာကြောင့်လဲ?⬇️
⚜️အသက်ရွယ်အနေထားတစ်ခု ရောက်နေသူများတွင် ငယ်ရွယ်နုပျိုစဥ်ကထက် တဖြည်းဖြည်းမသိမသာ လှုပ် ရှားဆောက်ရွက်မှုများ နှေးကွေးလာသည်ကို သတိချပ်မိ မယ်ထင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အဆီလေးများက နေရာအနှံ့ စုဝေးလာတတ်ပြီး ဝိတ်တက်ခြင်းလမ်းစဥ်ကို စတင်ပါတော့တယ်😔။
💎 ကြွက်သားများဆုံးရှူံးလာခြင်း 💎
👵🧔အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာမှုကြောင့် ဇီဝဖြစ်စဥ် ပြောင်းလဲမှုများ နှေးကွေးလာတတ်ပါတယ်။ ဥပမာအား
ဖြင့် အသက်၃၅နှစ် မှ အသက်၄၀အထိ ကျော်လွန်လာပါက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဇီဝဖြစ်စဥ်ပြောင်းလဲမှုများ ၅%မှ ၇%အထိ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။ ဇီဝဖြစ်စဥ်ကျဆင်း သွားရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ကြွက်သားများ ဆုံးရှူံးလာခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။
💎 စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံရခြင်း 💎
😨 တနေ့တာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ မိသားစုအရေးကိစ္စများ၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုများစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော စိတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များ များပြားလွန်းလှ သည့်အခါ ကော်တီစော်(Cortisol)ဟော်မုန်းများ များ လာတတ်ပါသည်။ ကော်တီစော်ဟော်မုန်းများကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အပြင်းအထန်လှုပ်ရှားမှုများမှ တဆင့်ထွက် ပေါ်လာသော ဟော်မုန်းအမျိုးစားဖြစ်သည်။ ထိုအခြေနေ မျိုးမှာမှ မဟုတ်ပါပဲ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ထွက်လာသော ကော်တီစော်များကတော့ ကယ်လိုရီများကိုပိုမိုစုဆောင်း သိုလှောင်ပေးနေလို့ပါပဲရှင်။
💎 အဆီများပိုပို၍ တိုးလာခြင်း 💎
🐷 အသက်အရွယ်လေးရလာတာနှင့်အမျှ ကြွက်သားများလည်း ဆုံးရှူံးလာစေသလို၊ အခြားသောအဆီများလည်း တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ကယ်လိုများအား ချေဖျက်ပေးနိုင်သော အဆီညိုများဆုံးရှူံးမှု များလာ၍ ကယ်လိုရီအဆီများအား စုဝေးစေတတ်သော အဆီဖြူများ တိုးလာခြင်းကလည်း လူကြီးမင်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အား ဝိတ်တက်ခြင်း၊
📈ဝိတ်တွေ တိုးလာခြင်း၊ အဆီပိုတွေ များလာခြင်းသည် လူကြီးမင်းတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ လူတိုင်း နီးပါးကြုံ တွေ့လာရမည် ကိစ္စရပ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
Top Beauty Plastics Surgery Center
🔷 2020 January၏ Promotionမှာ လူကြီးမင်းတို့ ပါဝင်လိုက်ပါ။